Dagaalka Ka Dhacay Deegaanada U Dhaxeeya Laascaanood – Kalabaydh Iyo Sool Joogto Ee Buuhoodle – Part 2 | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > ALL DARWIISH NEWS, WARARKA	> Dagaalka Ka Dhacay Deegaanada U Dhaxeeya Laascaanood – Kalabaydh Iyo Sool Joogto Ee Buuhoodle – Part 2
Dagaalka Ka Dhacay Deegaanada U Dhaxeeya Laascaanood – Kalabaydh Iyo Sool Joogto Ee Buuhoodle – Part 2
Monday, April 2, 2012 Laaska News
Laaska News Apr. 2, 2012
Dagaalada shalay ee ka dhacay sool Joogto oo ka tirsan deegaanka Buuhoodle iyo meel(o) u dhaxaysa Kalabaydh iyo Laascaanood ayaa waxaa kasoo baxayaa warar kala duwan oo haddana is khilaafsan marka loo eego cidda weerarka qaaday,qasaaraha uu geystay,dhimashada iyo dhaawaca,maxaabiista la qabtay, gaadiidka lagubay ama la qabtay ee soo kala gaadhay dhinacyada dagaalku dhex maray oo kala ah Somaliland iyo Khaatumo.
Labada dhinac waxay qoloba qolada kale ku eedeynaysaa in ay weerarka lahaayeen.
Waxaa dagaalada wax laga weydiiyay nin u hadlay Khaatumo oo magaciisu yahay Yaasiin Axmed Cabdi una qaabilsan Wasiirka Arrimaha Gudaha waxaa wareysi la yeelatay Sahra oo idaacadda VOA da Laanteeda Afsoomaaliga ,sida la sheegeyna kusugnaa aagga Buuhoodle waxaana hadaladiisa kamid ahaa:
Waxay weerar kusoo qaadeen laba meelood,dhinaca Laascaanood waxay weerar ku qaadeen Ciidamo Khaatumo ah oo dul fadhiyay,weerarka kalana waxay ku soo qaadeen Sool Joogto.
Waxa uu sheegay inay u eg tahay in labada weerar ay isku mar bilawdeen ama ay aad isugu dhawaayeen.
Waxa kale oo uu sheegay in dhinaca Sool Joogto” layska caabiyay”.
“Waxaa jirtay gaari shidaalka goostay oo ay ka jiiteen Meel, sidaan ka war helay” ayuu yidhi.
Markaa laba dhinac ayay kasoo qaadeen dhinaca Bariga iyo dhinaca Galbeedka ……
“Dib ayaa loo dhirbaaxay markaa imminka waxaa la dhaafiyay meel u dhaxeysa Sool Joogto iyo Maygaagle”.
Su’aal laga weydiiyay “weerarka” ama dagaalka ka dhacay aagga Laascaanood ayuu sheegay:
” in dagaalka dhinaca laascaanood ka dhacay ay ahayd halkii uu fadhiyay ciidankoodu (Khaatumo) ee dul fadhiyay iyaga(Ciidanka SL),si ay shaqo uga qabtaan”.
“Nasiib wanaag iyaga naftigoodii ayaa weerar soo qaaday,iyadoo ciidanka Khaatumo ay doonayeen inay weeraraan”.
Waxa uu raaciyay in halkaa 3 baabuur lagaga gubay midna waa laga qabtay.
Waxaa su’aal toos ah laga weydiiyay in maamulka Khaatumo ay weerarka lahaayeen (soo qaadeen),wuxuuna ku jawaabay.
inaysan arrintaasi waxba ka jirin,
weerarkana ay soo qaadeen maamulka SNM.
sidaan oganahayna ilaa dhawr iyo 20 tikniko ah ayaa kasoo qayb galay.
Suaalo laga weydiiyay in gaadiidka dagaalka iyo rag maxaabiis ah laga qabtay ciidankoodii oo ay somaliland kaqabatay ayuu ku jawaabay:
In hal Gaadhi laga qabtay ( Shidaalka goostay).
In ay iyaguna (Kh S) laba gaadhi ka qabsadeen dhinaca SL.
Inaysan Jirin wax dhimasho ah oo soo gaaray ciidankooda (Kh).
In 3 nin oo dhaawac ah oo 2 kamid ah ay yihiin dhaawac sahlan soo gaareen (Kh),halka ninka kalana uu sheegay in dhaawac lagu qabsaday oo uu galay gacanta SL.
Waxa uu sheegay in uu arkay meyd dhawr iyo tobon ah (ilaa 12 dhimasho) ah oo soo gaaray dhinaca kale (SL).
Waraysi uu ka qaaday Mr. Shirwac (VOA)
Wasiirka Gaashaandhigga Somaliland Axmed Xaaji Cali (Cadami).
Mr.Cadami oo kawaramayaa oo dagaaladaa waxa laga weydiiyay ayaa waxa uu hadalkiisii ku bilaabay:
Dagaalodaasi waxay ahaayeen dagaallo ballaadhan oo ay soo qaadeen kooxaha nabad diidka ah oo ay ku soo qaadeen labada aag, oo waqti badan dareenkaasi taagnaa oo midina yahay dhinaca Laascaanood iyo (ka kalana yahay) degmada Buuhuudle.
Labadaa aagba oo awalba dad aan maqlaynay,warna aan ka heleyney in ciidamo laysku uruursanayo,labadaa meelood baa laga soo qaaday.
Saaka subaxii waqti waliba 6 dii subaxnimo ah baa ‘dagaal weerarar’ laga soo qaaday, weerar gaadmo ah.
Yaa soo qaaday Wasiir?
Waxaa soo qaaday kooxaha Nabad diidka ah,baa soo qaaday.
Maxaad uga jeedaa ereyga ah muddaba waa laga war hayay?
Waqtiga aan joogno waa casrigii isgaarsiinta, wax qarsoomaya ma jiraan,waa waxaan jirin wax qarsooma,waxaa la ogaa oo laga warhayay in ciidamo ishubaynaya oo is uruursanaya oo hadafkooduna yahay in Somalilland dhulkaa xasiloon oo nabad galyada lagu kuunyo, in fad-qalale lagaliyo oo lasoo weeraro baannu haynay.
Dhiniciinna Somaliland ahaan maxaa qasaare ah ii idin soo gaaray dagaalkaasi saad sheegtay deegaano badan buu ka dhacaye?
Waan ogohay deegaanno badan buu ka dhacay,tuulooyin maaha deegaanno matalan,tuulooyin ilaa iyo Laascaanood ilaa Kalabaydh dhexdooda ah weeye dhinaca South ka ah matalan marka dhinaca Laascaanood la eegayo.
Qasaaraha annaga nasoo gaaray – askar dhimasho ah waa 4. 13 na waa dhaawac.
Dhinaca kale haddaynu eegno,iyaga dhinacooda waxay idinku eedeynayaan dagaalka inaad idinku kusoo qaadeen,dagaalku xagga Somaliland kaga baxay ka (yimid),maxaad ka warhaysaa iyaga xaggooda qasaare ahaan?
Qasaaraha dhinacooda gaadhay oo xaqiiqa ah waxaa weeye 9 baabuur oo gaadiid ah, 9 kaa waa 4 tikniko ah iyo 5 ta kakale oo gawaarida xamuulka ah,waa 9 baabuur oo dagaalka dhexdiisa lagu qabtay,wixii curfi bey leedahay,ciddii qabatay baa gacanta ku haysata,qasaaraha kalena wuxuu ahaa 47 da aan sheegay oo maxaabiis ahaan loo qabtay oo ay ku dhex jiraan laba wasiir iyo 3 korneyl oo ciidamada hogaaminayay.
Qasaare kale majiraa oo idin soo gaaray?
Wixii goobta laga soo tabiyo baannu sheegnaa beryahan kanna warkii wuxuu ku qiimo beelayna intii aan sheegay in la’ eg baa dhinaca kale laga sheegayaa.
Waxaana larabaa waxa la sheegaya inay wax xaqiiqa sugan ay tahay oo hadhawto lagy xisaabtamayo.
Mar haddii annagoo xeerinayna taa iyo dhaqanka uu leeyahay isgaarsiintu iyo faa’idadiisu waa inuu run sheeg noqdaa inytuu been sheeg noqon lahayd.
Annagu warka rasmiga ah oo aannu haynaa waxaa weeye dhaawaca 13 ka ah iyo 4 ta dhimashada ah.
wixii kadambeeya maanta duhurkii waa war cusub oo yimaada.
Warku waa socdaa
Tags: Buuhoodle, clashes, Dagaalka Waqdari, kalabaydh, laascaanood, News, SOMALIA, Somaliland
Moscow urges end to turmoil in Libya Syria’s self-proclaimed ‘friends’